Mkpụrụ anya: kedu ihe ha bụ, njirimara, nhazi na ọghọm | Network Meteorology
Oge oyi nke gosipụtara fim, usoro, katuunu, wdg. Ndi icicles. Ọ bụ ihe dị iche iche nke ice na-amanye na mmiri nke elu ụlọ, alaka osisi, oghere ndị dị na mbara ala na ọtụtụ ihe ndị ọzọ nke odida obodo. Ha na-apụtakarị n'oge oyi n'ihi obere okpomọkụ na nnukwu snowfall. Mgbe ụfọdụ enwere ike ịmepụta ha na-enweghị mkpa snow dị ka nke a ma nwee ike ibute nnukwu nsogbu maka ndị mmadụ n'oge ọdịda ha.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị etu esi eme icicles, kedu njirimara ha na ihe ọghọm ha nwere ike ịnọchite.
1 Mkpụrụ osisi n'oge oyi
2 Nhazi nke icicles
3 Ọnọdụ gburugburu ebe obibi
4 Ihe ọghọm nwere ike ịdị
Mkpụrụ osisi n'oge oyi
N’ezie anyị ahụlarị icicles na fim, usoro, eserese na-atọ, akwụkwọ ozi na ọtụtụ ebe. Kwesighi ịhụ ha n’ihu iji mara ihe ha bụ. Ọ bụ kpochapụwo nke oyi winters na tumadi ruru ka ndị na-aga n'ihu dripping nke mmiri mmiri mmiri na Nchikota na ike frosts ahụkarị nke oge a n'afọ. Anyị maara na n'oge oyi na-ajụ oyi n'ụzọ dị egwu, ọkachasị n'abalị. Mmiri mmiri na-aga n'ihu na-aga n'elu ụlọ n'elu mmiri n'oge mmiri ozuzo na-eme ka icicles na-etolite.
Dika ihe ndaputa na mberede na okpomoku di na ala di ala 0 anyi nwere ike ichota onodu di nma maka ichikota icicle. Ya bụ, mgbe ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị n'okpuru ogo 0 ma mmiri zoo ma ọ bụ na mmiri na-ezo, icicles nwere ike ịmalite site na mmiri mmiri na-aga n'ihu. Ndị a bụ njirimara ice stalactites a na-akpọ icicles.
Nhazi nke icicles
Ọ na-adịkarị n'obodo mepere emepe na-etolite n'elu ụlọ. Ọ dị mkpa na mbụ na i buru. N'ụzọ dị otú a, anyị ga-ekwenye na ọnọdụ okpomọkụ dị oke ala. Mmiri na-anọdụkwa na-anakọta n'elu ụlọ wee mepụta icicles. The ele mmadụ anya n'ihu agbaze nke snow na-ewe ebe Central awa nke ụbọchị na- na-enye ọtụtụ obere iyi mmiri n’okpuru akwa ọcha nke snow. Mgbe okpomọkụ na-ada n'abalị ma ahịrị mmiri ndị a na-akwụsị na nsọtụ elu ụlọ, ọ na-amalite ịjụ oyi ruo mgbe ọ gbanyesiri ike n'ime ice.
N’abalị, oyi na-atụ oyi na-eme ka ala nke ice kpụọ n’elu snow n’elu ụlọ ahụ, akụkụ dị n’ime nke uwe mwụda ahụ na-anọkwa nnọọ n’osimiri ahụ. Nke a bụ otú akụkụ dị n'ime ahụ si aga n'ihu. Ihe ndị tụlee ejedebe thawing ma ọ bụ gafere site na eaves ruo mgbe oyi ọzọ ozugbo. Ma ọ bụ na ha na ikuku ikuku dị na ihu na-abata na ihu igwe dị oke ala ma ha na-etolite na-agafe awa. Nke a bụ otu esi amịpụta agịga akpụrụ akpụ etu esi amịpụta oge oyi.
Ọ bụ ihe zuru ebe niile na n'ehihie, a ga-ekpocha elu igwe na ọnọdụ nwayọ nwayọ. N’ụzọ dị otú a, ụfọdụ agịga ice ndị e kechiri n’elu elu ụlọ nwere ike ịwapu ha mgbe anwụ na-acha ma ọ bụ ka oké okpomọkụ gbazee. Nke a na - ebute ihe ọghọm maka ndị na-agafe n’uko ụlọ. N'oge ụfọdụ, ọ bụ ndị mmiri na-egbu ndị nọ n'okpuru n'okpuru ihe ahịhịa ahụ nwụrụ. Typedị akụkọ a na-aputa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge oyi ọ bụla na mba ndị oyi na-atụ dị ka Russia ebe oke oyi na -emepụta ụdị nhazi a n'elu ụlọ.
Ọbụghị naanị na ejiri aha icicles mara ya, mana ọ dabere na ebe anyị nọ ya enwere ike ịmata ya na aha ndị ọzọ. Dabere na ebe ị nọ, e nwere ndepụta aha ndị anyị hụrụ spiers, chipiletes, pinganiles, candelizos, calambrizos, rencellos, ndị na-akersụ ma ọ bụ ndị na-a sucụ mmiri. N’ebe a na Spain n’ime ime Cantabria a na-akpọ ya cangalitu ma ọ bụ cirriu ebe na ndagwurugwu Roncal a na-akpọ ya churro n’agbanyeghi na okwu ịtụnanya bụ calamoco. Ọ na-ezo aka imi nke na-ada dị ka a ga-asị na ọ na-amị ala n'imi. Nke a bụkwa ụdịrị usoro katuun nke imi dị n'imi nke ndị ahụ na-agba oyi mgbe oyi na-atụ.
Ihe ọghọm nwere ike ịdị
Ihe onyonyo abughi nani na etolite na elu ulo nke obodo, kamakwa na emeputara na uwa. Anyị nwere ike ịhụ na ụfọdụ ugwu, nkume, alaka osisi, wdg. Etu esi esi agị ndị ice a. Na njedebe, anyị na-ahụ otu ihe egwu site na icicles naanị ma ọ bụrụ na ha na-emepụta n'obodo. Na gburugburu ebe obibi anyị nwere usoro mara mma mara mma nke kwesịrị ịchekwa na foto.
Agbanyeghị, n'obodo, ha nwere ike ibute nsogbu. Na nchịkọta nke snow n'elu ụlọ na nkụja na-esote nke anyị tụlere n'elu, ụmụ irighiri mmiri na-agba ume n'ihi obere okpomọkụ. Ọ bụrụ na ebili na okpomọkụ ọzọ, agịga ndị a na-amalite ịda, ọ bụkwa mgbe ahụ ka ha na-ewe ihe egwu nye ndị ji ụkwụ aga. Na mba anyị ọ na-eme na ụzọ dịpụrụ adịpụ ebe ọ bụ na anyị anaghị enwekarị okpomọkụ dị ala n'oge oyi. Agbanyeghị, mgbe ajọ mmiri oyi dị ka afọ a dị egwu, nsogbu ndị a nwere ike ịda.
Echere na ihe ruru 100 kwa afọ na Russia na-anwụ site na ịwụpụ icicle. Na mba ụfọdụ dịka Finland, e nwere ihe ịrịba ama na ụlọ ndị na-adọ aka na ntị banyere ihe egwu dị adị nke ihe ịtụnanya a. N'ebe ufodu ana ewere ya dika ihe onwu n'ihi na ha nwekwara ihe di iche. Ha malitere ikwu banyere ya n’afọ 1947 mgbe ihe ịtụnanya mere n’ebe miri emi. Ọ na - eme oke mmiri oyi nke Arctic ma ọ bụ Antarctic Ocean ebe okpomọkụ na - agbatị ruo -20 30 Celsius. Ọnọdụ okpomọkụ nke oke osimiri dị elu ebe ọ bụ na mmiri dị n’elu ụwa na-akpụkọta. N'ụzọ dị otú a, a na-ahapụ nnu n'ime usoro a ma mikpuo ebe ọ bụ na njupụta ya dị elu. Mmiri gbara ya gburugburu na-agbaze na otu kọlụm bụ stalactite nke na-egbochi mmiri site na nke ọ na-abanye na ya.
A na-akpọ ya icicle nke ọnwụ ebe ọ na-egbochi ihe niile n'ụzọ ya. Ọ bụrụ na ọ hụ anụmanụ na-eme nwayọọ nwayọọ, ọ ga-emecha mee ka ọ kpọnwụọ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere icicles na njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Mkpụrụ osisi